Amazwi KaDisemba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Futhi cishe ngaphandle kokuqaphela, uDisemba ungena ezimpilweni zethu. Ngenyanga yokugcina yonyaka izindawo eziseNingizimu Nenkabazwe zithokozela ihlobo, kanti ezaseNyakatho zidaywe mhlophe. Lapha eSpain, amakhaza nemvula yizona protagonists eziyinhloko okuphoqa abantu ukuthi bakhiphe izingubo zabo ezifudumele ukuze bazivikele, kodwa futhi neqhwa liwela ezintabeni eziphakeme kakhulu nasezifundeni ezisenyakatho kakhulu.
I-Los izisho zikadisemba Basitshela ngeziphepho, isithwathwa, futhi-ke, ukuphela konyaka nokuqala kwesisha.
1 Sinjani isimo sezulu ngokuvamile ngoDisemba eSpain?
2 Amazwi kaDisemba
Sinjani isimo sezulu ngokuvamile ngoDisemba eSpain?
UDisemba yinyanga lapho kuvame ukubanda kakhulu. I- Izinga lokushisa elijwayelekile lingu-8ºC sithatha njengesikhathi se-1981-2010, futhi isithwathwa neqhwa akuthathi isikhathi eside ukuvela, ikakhulukazi engxenyeni esenyakatho yenhlonhlo.
Uma sikhuluma ngemvula, yinyanga enesilinganiso esingu-82mm (inkomba ka-1981-2010), yize kujwayele ukwenzeka, izimvula ziningi kakhulu enyakatho-ntshonalanga yenhlonhlo kunasezweni lonke. Ukuthola umbono ocacile walokho okusilindeleyo, ake sibone ukuthi lezi zisho zisitshelani.
I-Saint Lucia, ubusuku obude kakhulu nosuku olufushane kakhulu: usuku loSanta nguDisemba 13, okuwusuku olufushane kakhulu onyakeni. Kusukela ngosuku olulandelayo, ubusuku buqala ukunciphisa.
Ukusa nokuhwalala, ngoDisemba kucishe kube ngasikhathi sinye: kunjalo. Ngale nyanga, imini nobusuku kuqhubeka cishe kufane.
Izinsuku zikaDisemba, izinsuku zomunyu; kusa nje, sekumnyama impela: uma ukujabulela ukuba ngaphandle, ungahle ube nomuzwa wokudabuka noma ukuthi untula amahora wokukhanya phakathi nenyanga kaDisemba.
UDisemba, inyanga yeqhwa nenyanga yeqhwaAkukhona nje ukuthi izinsuku zimfushane kepha futhi ziyabanda, futhi zingabanda kakhulu ezingxenyeni ezisenyakatho zezwe.
NgoDisemba, izindondolo zifriziwe futhi ama-chestnut ayosa: ngamakhaza okuqala kanye / noma ukuwa kweqhwa, izitshalo ziyahlupheka futhi lezo ezibuthaka kakhulu, njengamakhambi, zingafa. Kodwa-ke, izihlahla zezithelo, njenge-chestnut, seziqedile ukuvuthisa izithelo zazo, ezingadliwa zisentsha noma zosiwe.
NgoDisemba, akekho onesibindi ongathuthumela: ngalenyanga kungcono ukuthi ungayifaki engozini. Uma ubanda, hlanganisa ukuze ungabanjwa umkhuhlane.
KuSanta Nicholas, iqhwa elisefulethini: Usuku lukaSanta ngoDisemba 6, usuku lapho imiphakathi eminingi enyakatho yeSpain idayiwe mhlophe yiqhwa emadolobheni abo nasemasimini abo.
NgoDisemba kuyabanda, futhi kuyashisa ehlobo: ukuba seSpain, kufanele kube njalo. Ebusika kufanele kubande, futhi ehlobo kushise.
NgoDisemba, umalusi nabahlwempu bazinaka izimvu babase umlilo: Lapho amazinga okushisa ehla, akukho okufana nokusondela emlilweni omuhle ukuze ufudumale ukhohlwe ngamakhaza, noma ngabe umzuzwana nje.
Kuze kuzalwe ingane, kungalambi noma kubande: kwesinye isikhathi kungenzeka, ikakhulukazi eningizimu naseningizimu-mpumalanga yezwe, ukuthi amakhaza athatha isikhathi eside ukufika. Ngalesi sizathu, kuvame ukuthi kuze kube nguDisemba 21, okuwusuku okuzalwa ngalo uMntwana uJesu, akukho makhaza noma indlala.
Kusukela Enganeni kuya phambili, kuyabanda futhi kulambile. NgoKhisimusi, kuvulandi; ngePhasika, ekulimaleni: Kusukela kwazalwa uMntwana, kungenzeka kakhulu ukuthi amazinga okushisa ehle ezweni lonke, okwenza umphakathi wonke uhlangane.
NgeSan Silvestre, bopha imbongolo yakho ngohafu: usuku lweNgcwele nguDisemba 31, usuku lokugcina lwenyanga nonyaka. Ngabe ujwayele ukuvalelisa kanjani unyaka? Ngeziphepho eziluhlaza, ngakho-ke uma unezilwane ngaphandle kufanele uzivikele ngangokunokwenzeka.
Noma ngabe libalele kangakanani uDisemba, ungayeki ikepisi lakho: ilanga kule nyanga alishisi kangako ehlobo, ngoba imisebe ifinyelela kithi ithambekele kakhulu njengokuthambekela koMhlaba. Ngenxa yalokhu, kubalulekile ukuthi uhlale ugqoke ibhantshi noma ijazi ukugwema ukumangazwa amakhaza.
Imvula eningi ngoDisemba, unyaka omuhle, linda: Kukholakala ukuthi, uma imvula inkulu kakhulu ngenyanga yokugcina yonyaka, unyaka olandelayo uzobekezeleka kakhulu.
Ngokungani ngosuku olwandulela uKhisimusi, akukho ukuhlwanyela okuhle: Uma lingani ngoDisemba 24, usuku olwandulela uKhisimusi, imbewu yezitshalo njengo-anyanisi noma ugalikhi kungenzeka ingakhuli kahle ngokuphelele.
Oshisa ilanga ngoKhisimusi, ngomlilo wePhasika uzofunaUma ngosuku lukaKhisimusi, uDisemba 25, libalele, ngePhasika (ezinsukwini ezintathu emva kokuvuka kukaJesu) sizobanda.
»San Silvestre, shiya unyaka uhambe». Unyaka uphendule wathi: "Kukhona isithelo sokugcina nembali yokuqala": kungenzeka singathandi amakhaza, kepha singaqiniseka njalo ukuthi akukho okuphakade, futhi okuzobuya ukushisa kukho. Ubufakazi balokhu yizimbali zokuqala ezivela kwezinye izihlahla ekuqaleni konyaka, njengezihlahla ze-alimondi ngokwesibonelo, ezinezimbali eziyigugu nezintekenteke eziqhakaza ngasekupheleni kukaJanuwari noma ekuqaleni kukaFebhuwari kuye ngokuthi ubusika bumnene kangakanani.
Ngabe zikhona ezinye izisho ozaziyo zale nyanga? Uma kunjalo, zizwe ukhululekile ukushiya kumazwana 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Amazwi kaDisemba